HomeLoveအရမျးကိုလှတဲ့ ကောငျမလေးတှေ Single ဖွဈနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျး
ဒီကောငျမလေး နဲ့ Fb acc မှာ Fri ဖွဈနတော အတျောတော့ ကွာခဲ့ပါပွီ ။ ခနျမှနျးခွေ2နှဈ လောကျတောငျ ရှိမလားပဲ ။ သူမကို ကွညျ့ရတာ.. အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျလာရငျတော့ နှလုံးလမျးကွောငျးမှာ ကြှနျးခံနပေုံရတယျ ။ တဈယောကျနဲ့မှ Anniversary အထိ မရောကျလိုကျဘူး ။ အခြိနျတနျရငျ ပကျြသှားတာ ခညျြးပဲရယျ ။
လှတာကတော့ တျောတေျာ့ကို လှပပါတယျ ။ မကျြလုံးလေးတှဆေို ဝိုငျးစကျပွီး Brown Colour လေးနဲ့.. အသားအရကေ နပေူထဲထှကျလေ ပိုလှလေ ၊ ဥမ်မာဓါနီ ပပဝတီ ဝငျစားသလား ထငျမှတျရတယျ ၊ ဝငျးနတောပဲရယျ ။ အရပျက မနိမျ့မမွငျ့ မွနျမာ မိနျးခလေးပီသတဲ့ Normal Size ။ ဆံပငျက အမွဲတမျး Update ဖွဈတယျ ၊ ဖွောငျလိုကျကောကျလိုကျနဲ့ Style က ကပြါ့.. ။
တခါတလေ သူမ Live လှငျ့လို့ ကွညျ့မိတယျ ။ အသံလေးက မှေးကာစ ခလေးအတိုငျး အသဲယားစရာ မပီကလာ ပီကလာနဲ့ ။ လူပုံစံလေးက ကိုငျပေါကျ လှငျ့ပဈခငျြစရာ ကဈြကဈြ လဈြလဈြနဲ့ ခဈြစရာလေး ။ စိတျထားလညျး ကောငျးပုံရတယျ ၊ ပရဟိတ လုပျတဲ့ Post ခဏခဏ တှရေ့တယျ ။ အနအေထိုငျလညျး အေးဆေးပါပဲ ၊ သိမျသိမျမှမှေ့နေဲ့ တညျငွိမျသူလေး ၊ ဘာသာတရားလညျး ကိုငျးရှိုငျးတယျ ။ သူ့ Wall ထဲမှာဆို ဘုရားသှား ကြောငျးတကျ အမှတျတရ Save ထားတဲ့ ပုံလေးတှခေညျြး.. ။
ခကျတာက ဘယျတယောကျကမှ သူ့အနား ရကျကွာကွာ မနကွေဘူး ၊ မတှဲကွဘူး ၊ စှနျခှာ ထှကျပွေးသှားကွတာခညျြးပဲ ။ သိရသလောကျကတော့ သူမက Silent မထားဘူး ၊ တှဲလိုကျရငျ Official ပဲ ၊ အေး ဒါပမေယျ့ မွဲလညျး မမွဲဘူး။ ခု Relationships တကျတယျနျော ၊ နောကျ 1 လ ၊2လဆို Single ပွနျဖွဈရော ၊ အဲ့တော့ သတိထားမိ လာတော့တာပေါ့။
ဘာလားပေါ့.. ဒီလောကျလှတဲ့ ကောငျမလေး Perfect ဖွဈတဲ့ ကောငျမလေးကိုမြား ရာရာစစ ထားသှား ပဈသှားတဲ့ သူကရှိသေး ။ သူ့ Ex တှေ တျောတျော တုံးတယျ ၊ နောကျမှ နောငျတ ရနလေိမျမယျ ဆိုပွီး စိတျထဲက သူမအစား ပွောမိသေးတယျ။
တရကျ သူမတငျတဲ့ ပုံကို Comment ဝငျပေးမိတယျ ။ အဲ့ကစ ဘဝ ပကျြတော့မယျမှနျး ဘယျသိခဲ့မလဲ ? သူမ ဆီက Reply ပွနျလာတယျ ။ နောကျပိုငျး Chat box မှာ ပွောဖွဈကွတယျ ။ ပွောရရငျ ခငျမငျ ရငျးနှီးတဲ့ အဆငျ့ ရောကျလာတယျ ၊ Video call ပွောဖွဈတယျ ၊ အပွငျမှာ Dating လုပျဖွဈတယျ ။ သိပျမကွာဘူး ရညျးစားတှေ ဖွဈသှားတယျပေါ့။
သူမ ဘာကွောငျ့ ရညျးစားနဲ့မမွဲလဲ ? အဖွကေို တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သိလာရပွီလေ ၊ ဘယျ့နှယျ့ သူမက ကပျြမှ မပွညျ့တာကိုး ။ ဘယျလိုလုပျ သူ့ဒဏျခံနိုငျမလဲ ? မှတျမှတျရရ ခဈြသူဖွဈပွီး 10 ရကျကြျော လောကျကပေါ့။ အဲ့နကေ့ မိုးတှေ သညျးကွီး မညျးကွီးရှာတယျ။ Aww ကိုယျက ထီးလေး ဖှငျ့ဆောငျးမယျ လုပျတော့.. သူမက..
" ပွနျ ပိတျလိုကျ "
" ဟငျ.. ဘာလို့လဲ မိုးရှာနတေယျလေ စိုကုနျမှာပေါ့ "
" မရှညျနဲ့ ပိတျဆိုပိတျ ၊ လာ မိုးရထေဲ လမျးလြှောကျရအောငျ Romantic ဆနျတာပေါ့ " တဲ့။
ကိုယျလညျး အတိုကျအခံ လုပျမနတေော့ဘူး ။ ခဈြသူဖွဈကာစ ဆိုတော့ အလြှော့ ပေးလိုကျပါတယျ ။ သူမနဲ့အတူ ထီးကို လမျးဘေးပဈခြ မိုးရထေဲ လြှောကျရတော့တာပေါ့ ။
ကဲ နာရီဝကျလောကျလြှောကျ ကနြျော မပွောဘူး။ အလှနျဆုံး တနာရီထိလား ရသေးတယျ ။ ခုဟာက သုံးနာရီ လေးနာရီလောကျကို မိုးရထေဲ မနားတမျး Run တာဗြာ သရေခညျြရဲ့ ။ လူလညျး သမေလို ရှငျမလိုပဲ ။ နှာတှလေညျး ခြေ.. ခမျြးလို့ ဂတျဂတျ ဂတျဂတျတုနျ တိုတကျနရေော..။
အံမယျ သူမကိုကွညျ့တော့ အေးဆေးပဲ ၊ ကိုရီးယားကားထဲက မကျြနှာပေးနဲ့ လကျကိုဆနျ မိုးစကျတှေ ဆော့ကစားနသေေး ။ ကိုယျ့မှာသာ တပတျကြျော အပွငျးဖြားတာ.. မနညျး ဆေးပွနျကုလိုကျ ရတယျလေ အဲ့လိုတှပေါဆို။
နောကျပီး ရှိသေးတယျ.. ကုနျးပိုး ပိုးခိုငျးတဲ့ ကိစ်စ။ ရတယျ မလုပျဘူး မပွောဘူး ၊ ခဈြသူပဲ အနှံတာခံရမှာ အလိုလိုကျရမှာပေါ့ ။ လူရှငျးတဲ့ ပနျးခွံ ဒါမှမဟုတျ တံတားပျေါတို့ လမျးကွားထဲတို့ပေါ့ ဟုတျဘူးလား?
ခုဟာက လူကွပျပါတယျဆိုတဲ့ Bus ကားပျေါမှာ စတိုငျကကြ ၊ လိမျ့ကမြယျ့ Junction City တို့ Myanmar Plaza လို နရောမြိုးမှာ ရှတေိဂုံဘုရားပျေါလို လူထူထပျတဲ့ နရောမှာ ၊ ရုပျရှငျရုံထဲ ဝငျတာကအစ ၊ ဆူရှီဆိုငျ ကွေးအိုးဆိုငျထဲ ဝငျသှားတာက အဆုံး အလကားနေ ကုနျးပိုး ပိုးခိုငျးတာဗြာ စဉျးစားကွညျ့ ။
ရညျးစားထားတာလေ မင်ျဂလာဈေးက အထုပျထမျးတဲ့ ကူလီမှ မဟုတျဘဲ ။ ကွာတော့ ကြောကုနျးမှာ ပှေးလိုလို ညှငျးလိုလို အကှကျအကှကျလေးတှပေါ ပေါကျလာတဲ့ အထိ ။
နောကျတခုကလညျး ရောကျလရော ဓာတျပုံ ရိုကျခိုငျးတာ ။ ရိုကျပါ ။ မရိုကျနဲ့ မပွောဘူး ။ ကနြျောက Camera Men သူမက Photo Model စတှဲကတညျးက ဒီလိုဖွဈမယျ သိပွီးသား ။ ဒါပမေယျ့ဗြာ သူမက Over ကို လုပျလှနျးတယျ ။ သူ့ပုံတှကေို သူမြားနဲ့ မတူခငျြတာရယျ နရောကအစ အဆနျး ဖွဈခငျြတာရယျ အဲ့အခကျြတှကေ ရှော့သိပျတကျခဲ့တာ။
ဥပမာဗြာ.. ရမွေောငျးထဲ ဆငျးရိုကျရတယျ ။ အံမယျ သူမကကြ ပလကျဖောငျးပျေါမှာ ထီးလေးဆောငျး အခနျသားနဲ့လေ။ ပေ 30 လောကျအမွငျ့ကို လှကေားနဲ့တကျ ၊ အသဲတယားယား ရငျတလှပျလှပျနဲ့ ရိုကျရတယျ ။ ဒငျးက အောကျမှာ ပနျးလေးတှေ ကြဲထားတဲ့ အလယျမှာ ပကျလကျလေးလှနျ အိပျလို့ ၊ အံမယျ အသညျးပုံလေးပါ လုပျထားသေး.. ။ Post က အသမေိုကျ အလနျးဇယား ကိုယျမှာသာ ပွုတျကရြငျ ကှိကနဲ မြိုးတုနျးမှာ။
ဝမျးလြားမှောကျ ရိုကျပေးရတာက တမြိုး ဇောကျထိုး ရိုကျပေးရတာက တဈမြိုး လူကကွာတော့ ဖုနျအလိမျးလိမျးတကျပွီး သူတောငျးစားလေးနဲ့ တူမှနျးမသိ တူလာတယျ ။ အိမျက ထှကျလာတော့ အကောငျး ပွနျရောကျရငျ စုတျပကျြသတျ နလေို့ အိမျကတောငျ မေးတယျ ။ ငါ့သား ပနျးရံမြား ဝငျရှကျလာတာလား တဲ့ ။
ညဘကျကတြော့လညျး အိပျကောငျးတဲ့ အခြိနျ2နာရီ3နာရီ လောကျ ဖုနျးဆကျပွီ ။ ဘာလို့လဲ မေးကွညျတော့ ရှုး ထပေါကျတာ သရဲကွောကျ လို့တဲ့ သရေော ။ ကိုယျမှာ နတေို့ငျး အိပျရေးကို ပကျြလို့ မနကျဆို အလုပျ နောကျကလြို့ Fine တပျ ခံရတယျ ။ ကွာတော့ မကျြတှငျးဟောကျပကျနဲ့ မှနျတောငျ မကွညျရဲဘူး ကိုယျ့ရုပျကိုယျ ပွနျပွနျလနျ့မိလို့လေ။
နောကျထပျ ကနျြသေးတယျ ။ ရောကျတဲ့ အရပျကနေ Video Call ဖှငျ့ခိုငျးတဲ့ ကိစ်စ ။ စဉျးစားကွညျ့လေ တဈခြို့ နရောတှဆေို ဘယျလိုလုပျ Video Call ပွောလို့ အဆငျပွပေါ့မလဲ ?
သူမက မရဘူး ၊ ခကျြခငျြးဆို ခကျြခငျြးမှ။ ကိုယျ့မှာ ရခြေိုးရငျး တနျးလနျး VC ဖှငျ့ပွောရတာ ဆောငျးတှငျး အေးရတဲ့အထဲ နာရီပေါငျးမြားစှာ VC ပွောရတာ ရစေိုလကျစနဲ့ လူက အဆုတျအအေးမိ ရောဂါပါ ဖွဈရော ။
ခုတော့လညျး သူမနဲ့ ပွတျသှားပါပွီလေ ။ ဒီတဈခါ သူမဘကျက အရငျ စဖွတျတာ အကွောငျးရငျးက တှဲရတာ ပငျြးလာလို့ တဲ့လေ ၊ ကြေးဇူးမြားတောငျ Double တငျသေး ။ အဲ့နကေ့ အပြျောတှလှေနျပွီး တှသေ့မြှ အလှုခံ အကုနျ ထညျ့ပွဈတာ.. တှကေ့ရာလူ Fly kiss တှေ ခညျြးပေးပဈတာ.. ။
ခငျဗြား တို့လညျး သတိထားပါ ။ မိနျးခလေး တဈယောကျ သိပျလှလှနျးနပေါလကျြ Single ဖွဈနတေယျ ။ Perfect ဖွဈပါလကျြနဲ့ ရညျးစားနဲ့ မမွဲဘဲ မကွာခဏ ဆိုသလို FA ဖွဈနတေယျဆို Propose လုပျရငျ ကွညျ့လုပျ ၊ ကပျြမပွညျ့ ပွား 90 တှေ ။ အဲ့ဒါမှ Danger အစဈတှေ ဖွဈနတေတျတယျလေ ။ စိတ်တဇ ဆေးရုံ ရောကျဖို့က 100 % သခြောပွီသာမှတျ.. ။
အရမ်းကိုလှတဲ့ ကောင်မလေးတွေ Single ဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဒီကောင်မလေး နဲ့ Fb acc မှာ Fri ဖြစ်နေတာ အတော်တော့ ကြာခဲ့ပါပြီ ။ ခန်မှန်းခြေ2နှစ် လောက်တောင် ရှိမလားပဲ ။ သူမကို ကြည့်ရတာ.. အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေပုံရတယ် ။ တစ်ယောက်နဲ့မှ Anniversary အထိ မရောက်လိုက်ဘူး ။ အချိန်တန်ရင် ပျက်သွားတာ ချည်းပဲရယ် ။
လှတာကတော့ တော်တော့်ကို လှပပါတယ် ။ မျက်လုံးလေးတွေဆို ဝိုင်းစက်ပြီး Brown Colour လေးနဲ့.. အသားအရေက နေပူထဲထွက်လေ ပိုလှလေ ၊ ဥမ္မာဓါနီ ပပဝတီ ဝင်စားသလား ထင်မှတ်ရတယ် ၊ ဝင်းနေတာပဲရယ် ။ အရပ်က မနိမ့်မမြင့် မြန်မာ မိန်းခလေးပီသတဲ့ Normal Size ။ ဆံပင်က အမြဲတမ်း Update ဖြစ်တယ် ၊ ဖြောင်လိုက်ကောက်လိုက်နဲ့ Style က ကျပါ့.. ။
တခါတလေ သူမ Live လွှင့်လို့ ကြည့်မိတယ် ။ အသံလေးက မွေးကာစ ခလေးအတိုင်း အသဲယားစရာ မပီကလာ ပီကလာနဲ့ ။ လူပုံစံလေးက ကိုင်ပေါက် လွှင့်ပစ်ချင်စရာ ကျစ်ကျစ် လျစ်လျစ်နဲ့ ချစ်စရာလေး ။ စိတ်ထားလည်း ကောင်းပုံရတယ် ၊ ပရဟိတ လုပ်တဲ့ Post ခဏခဏ တွေ့ရတယ် ။ အနေအထိုင်လည်း အေးဆေးပါပဲ ၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ တည်ငြိမ်သူလေး ၊ ဘာသာတရားလည်း ကိုင်းရှိုင်းတယ် ။ သူ့ Wall ထဲမှာဆို ဘုရားသွား ကျောင်းတက် အမှတ်တရ Save ထားတဲ့ ပုံလေးတွေချည်း.. ။
ခက်တာက ဘယ်တယောက်ကမှ သူ့အနား ရက်ကြာကြာ မနေကြဘူး ၊ မတွဲကြဘူး ၊ စွန်ခွာ ထွက်ပြေးသွားကြတာချည်းပဲ ။ သိရသလောက်ကတော့ သူမက Silent မထားဘူး ၊ တွဲလိုက်ရင် Official ပဲ ၊ အေး ဒါပေမယ့် မြဲလည်း မမြဲဘူး။ ခု Relationships တက်တယ်နော် ၊ နောက် 1 လ ၊2လဆို Single ပြန်ဖြစ်ရော ၊ အဲ့တော့ သတိထားမိ လာတော့တာပေါ့။
ဘာလားပေါ့.. ဒီလောက်လှတဲ့ ကောင်မလေး Perfect ဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးကိုများ ရာရာစစ ထားသွား ပစ်သွားတဲ့ သူကရှိသေး ။ သူ့ Ex တွေ တော်တော် တုံးတယ် ၊ နောက်မှ နောင်တ ရနေလိမ်မယ် ဆိုပြီး စိတ်ထဲက သူမအစား ပြောမိသေးတယ်။
တရက် သူမတင်တဲ့ ပုံကို Comment ဝင်ပေးမိတယ် ။ အဲ့ကစ ဘဝ ပျက်တော့မယ်မှန်း ဘယ်သိခဲ့မလဲ ? သူမ ဆီက Reply ပြန်လာတယ် ။ နောက်ပိုင်း Chat box မှာ ပြောဖြစ်ကြတယ် ။ ပြောရရင် ခင်မင် ရင်းနှီးတဲ့ အဆင့် ရောက်လာတယ် ၊ Video call ပြောဖြစ်တယ် ၊ အပြင်မှာ Dating လုပ်ဖြစ်တယ် ။ သိပ်မကြာဘူး ရည်းစားတွေ ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
သူမ ဘာကြောင့် ရည်းစားနဲ့မမြဲလဲ ? အဖြေကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာရပြီလေ ၊ ဘယ့်နှယ့် သူမက ကျပ်မှ မပြည့်တာကိုး ။ ဘယ်လိုလုပ် သူ့ဒဏ်ခံနိုင်မလဲ ? မှတ်မှတ်ရရ ချစ်သူဖြစ်ပြီး 10 ရက်ကျော် လောက်ကပေါ့။ အဲ့နေ့က မိုးတွေ သည်းကြီး မည်းကြီးရွာတယ်။ Aww ကိုယ်က ထီးလေး ဖွင့်ဆောင်းမယ် လုပ်တော့.. သူမက..
" ပြန် ပိတ်လိုက် "
" ဟင်.. ဘာလို့လဲ မိုးရွာနေတယ်လေ စိုကုန်မှာပေါ့ "
" မရှည်နဲ့ ပိတ်ဆိုပိတ် ၊ လာ မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ရအောင် Romantic ဆန်တာပေါ့ " တဲ့။
ကိုယ်လည်း အတိုက်အခံ လုပ်မနေတော့ဘူး ။ ချစ်သူဖြစ်ကာစ ဆိုတော့ အလျှော့ ပေးလိုက်ပါတယ် ။ သူမနဲ့အတူ ထီးကို လမ်းဘေးပစ်ချ မိုးရေထဲ လျှောက်ရတော့တာပေါ့ ။
ကဲ နာရီဝက်လောက်လျှောက် ကျနော် မပြောဘူး။ အလွန်ဆုံး တနာရီထိလား ရသေးတယ် ။ ခုဟာက သုံးနာရီ လေးနာရီလောက်ကို မိုးရေထဲ မနားတမ်း Run တာဗျာ သေရချည်ရဲ့ ။ လူလည်း သေမလို ရှင်မလိုပဲ ။ နှာတွေလည်း ချေ.. ချမ်းလို့ ဂတ်ဂတ် ဂတ်ဂတ်တုန် တိုတက်နေရော..။
အံမယ် သူမကိုကြည့်တော့ အေးဆေးပဲ ၊ ကိုရီးယားကားထဲက မျက်နှာပေးနဲ့ လက်ကိုဆန် မိုးစက်တွေ ဆော့ကစားနေသေး ။ ကိုယ့်မှာသာ တပတ်ကျော် အပြင်းဖျားတာ.. မနည်း ဆေးပြန်ကုလိုက် ရတယ်လေ အဲ့လိုတွေပါဆို။
နောက်ပီး ရှိသေးတယ်.. ကုန်းပိုး ပိုးခိုင်းတဲ့ ကိစ္စ။ ရတယ် မလုပ်ဘူး မပြောဘူး ၊ ချစ်သူပဲ အနွံတာခံရမှာ အလိုလိုက်ရမှာပေါ့ ။ လူရှင်းတဲ့ ပန်းခြံ ဒါမှမဟုတ် တံတားပေါ်တို့ လမ်းကြားထဲတို့ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား?
ခုဟာက လူကြပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Bus ကားပေါ်မှာ စတိုင်ကျကျ ၊ လိမ့်ကျမယ့် Junction City တို့ Myanmar Plaza လို နေရာမျိုးမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်လို လူထူထပ်တဲ့ နေရာမှာ ၊ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ ဝင်တာကအစ ၊ ဆူရှီဆိုင် ကြေးအိုးဆိုင်ထဲ ဝင်သွားတာက အဆုံး အလကားနေ ကုန်းပိုး ပိုးခိုင်းတာဗျာ စဉ်းစားကြည့် ။
ရည်းစားထားတာလေ မင်္ဂလာဈေးက အထုပ်ထမ်းတဲ့ ကူလီမှ မဟုတ်ဘဲ ။ ကြာတော့ ကျောကုန်းမှာ ပွေးလိုလို ညှင်းလိုလို အကွက်အကွက်လေးတွေပါ ပေါက်လာတဲ့ အထိ ။
နောက်တခုကလည်း ရောက်လေရာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခိုင်းတာ ။ ရိုက်ပါ ။ မရိုက်နဲ့ မပြောဘူး ။ ကျနော်က Camera Men သူမက Photo Model စတွဲကတည်းက ဒီလိုဖြစ်မယ် သိပြီးသား ။ ဒါပေမယ့်ဗျာ သူမက Over ကို လုပ်လွန်းတယ် ။ သူ့ပုံတွေကို သူများနဲ့ မတူချင်တာရယ် နေရာကအစ အဆန်း ဖြစ်ချင်တာရယ် အဲ့အချက်တွေက ရှော့သိပ်တက်ခဲ့တာ။
ဥပမာဗျာ.. ရေမြောင်းထဲ ဆင်းရိုက်ရတယ် ။ အံမယ် သူမကကျ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ထီးလေးဆောင်း အခန်သားနဲ့လေ။ ပေ 30 လောက်အမြင့်ကို လှေကားနဲ့တက် ၊ အသဲတယားယား ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ ရိုက်ရတယ် ။ ဒင်းက အောက်မှာ ပန်းလေးတွေ ကျဲထားတဲ့ အလယ်မှာ ပက်လက်လေးလှန် အိပ်လို့ ၊ အံမယ် အသည်းပုံလေးပါ လုပ်ထားသေး.. ။ Post က အသေမိုက် အလန်းဇယား ကိုယ်မှာသာ ပြုတ်ကျရင် ကွိကနဲ မျိုးတုန်းမှာ။
ဝမ်းလျားမှောက် ရိုက်ပေးရတာက တမျိုး ဇောက်ထိုး ရိုက်ပေးရတာက တစ်မျိုး လူကကြာတော့ ဖုန်အလိမ်းလိမ်းတက်ပြီး သူတောင်းစားလေးနဲ့ တူမှန်းမသိ တူလာတယ် ။ အိမ်က ထွက်လာတော့ အကောင်း ပြန်ရောက်ရင် စုတ်ပျက်သတ် နေလို့ အိမ်ကတောင် မေးတယ် ။ ငါ့သား ပန်းရံများ ဝင်ရွက်လာတာလား တဲ့ ။
ညဘက်ကျတော့လည်း အိပ်ကောင်းတဲ့ အချိန်2နာရီ3နာရီ လောက် ဖုန်းဆက်ပြီ ။ ဘာလို့လဲ မေးကြည်တော့ ရှုး ထပေါက်တာ သရဲကြောက် လို့တဲ့ သေရော ။ ကိုယ်မှာ နေ့တိုင်း အိပ်ရေးကို ပျက်လို့ မနက်ဆို အလုပ် နောက်ကျလို့ Fine တပ် ခံရတယ် ။ ကြာတော့ မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့ မှန်တောင် မကြည်ရဲဘူး ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် ပြန်ပြန်လန့်မိလို့လေ။
နောက်ထပ် ကျန်သေးတယ် ။ ရောက်တဲ့ အရပ်ကနေ Video Call ဖွင့်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စ ။ စဉ်းစားကြည့်လေ တစ်ချို့ နေရာတွေဆို ဘယ်လိုလုပ် Video Call ပြောလို့ အဆင်ပြေပါ့မလဲ ?
သူမက မရဘူး ၊ ချက်ချင်းဆို ချက်ချင်းမှ။ ကိုယ့်မှာ ရေချိုးရင်း တန်းလန်း VC ဖွင့်ပြောရတာ ဆောင်းတွင်း အေးရတဲ့အထဲ နာရီပေါင်းများစွာ VC ပြောရတာ ရေစိုလက်စနဲ့ လူက အဆုတ်အအေးမိ ရောဂါပါ ဖြစ်ရော ။
ခုတော့လည်း သူမနဲ့ ပြတ်သွားပါပြီလေ ။ ဒီတစ်ခါ သူမဘက်က အရင် စဖြတ်တာ အကြောင်းရင်းက တွဲရတာ ပျင်းလာလို့ တဲ့လေ ၊ ကျေးဇူးများတောင် Double တင်သေး ။ အဲ့နေ့က အပျော်တွေလွန်ပြီး တွေ့သမျှ အလှုခံ အကုန် ထည့်ပြစ်တာ.. တွေ့ကရာလူ Fly kiss တွေ ချည်းပေးပစ်တာ.. ။
ခင်ဗျား တို့လည်း သတိထားပါ ။ မိန်းခလေး တစ်ယောက် သိပ်လှလွန်းနေပါလျက် Single ဖြစ်နေတယ် ။ Perfect ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ရည်းစားနဲ့ မမြဲဘဲ မကြာခဏ ဆိုသလို FA ဖြစ်နေတယ်ဆို Propose လုပ်ရင် ကြည့်လုပ် ၊ ကျပ်မပြည့် ပြား 90 တွေ ။ အဲ့ဒါမှ Danger အစစ်တွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်လေ ။ စိတ္တဇ ဆေးရုံ ရောက်ဖို့က 100 % သေချာပြီသာမှတ်.. ။